Enwere ike ịzụta akara azụ azụ GOV?
Mgbe ọ na-abịakwute akara azụmazụ kachasị ike sitere na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti na ibe weebụ, otu ihe ị ga-aghọta nke mbụ. Ihe bụ na ị nweghị ike ịzụtaghachi backlinks GOV, ị nwere ike ịnweta ha. Nke a bụ ihe dị n'okpuru ebe m ga-egosi gị usoro nke ịnweta ndị a backlinks bara uru na ọtụtụ ụzọ-egosi ụzọ m na-adịbeghị anya nwalere maka m website. Nke ahụ ga-abụ ọrụ na-ewe oge, m ga-ekweta. Ma ị ka na-achọ ịnweta ikike ha dị ike, ọ bụghị gị? Ya mere, nke a bụ otu ị nwere ike isi zụtaghachi akwụkwọ ndekọ GOV - itinye oge na mgbalị gị n'otu n'ime ihe ndị na-esonụ: ịza ajụjụ banyere blọọgụ gọọmentị, ede banyere ụlọ ọrụ gọọmentị ma ọ bụ ozu ndị yiri ya, ịjụ ajụjụ banyere otu ụlọ ọrụ ma ọ bụ onye obodo, yana nkwanye obi ike iji nweta akara azụ azụ ahụ kwesịrị ekwesị - find my super ato. Ya mere, ka anyị lelee ikpe ọ bụla nke nwere ike ịnye aka nyere gị aka ịzụta akara azụ GOV - na-akwụ ụgwọ ọrụ gị maka nke ahụ.
Na-ekwu okwu banyere Gọọmenti Gọọmenti
Ịhapụ ihe dị na mkpokọta GOV blọọgụ bụ otu n'ime ụzọ ndị kachasị esi enweta ụgwọ backlinks. Otú ọ dị, dị ka ikwu okwu n'ebe ndị ọzọ na Ịntanetị, ọrụ ahụ adịghị mfe dịka o nwere ike iyi ka ọ na-ele ya anya. Ihe ọ bụ bụ na enweghi ike ịnweta òkè ọdụm nke weebụsaịtị ndị metụtara ya maka ịza ajụjụ, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, ọ ga-abụ na o nwere ike ịnye naanị backlinks na-adịghị.Ya mere, ị ga-etinye oge dị ukwuu iji chọpụta ndị na-eme ihe omume maka ịchọta njikọ njikọ. Nke ahụ ga-abụ ọrụ kachasị njọ ebe a.
Ide ihe banyere ụlọ ọrụ ma ọ bụ njikọ metụtara
Tinyekwuo anya na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog - dee nnukwu isiokwu banyere ụlọ ọrụ gọọmentị ma ọ bụ ahụ metụtara ya. Ị nwere ike dee nke ọma banyere onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị - ịjụ ajụjụ otu onye ọrụ ụlọ ọrụ, ma ọ bụ onye na-enwe mmetụta dị ukwuu na-emetụtakwa ndị mmadụ iji nweta ụfọdụ backlinks. Dịka ọmụmaatụ, ịmepụta isiokwu ma ọ bụ mkparịta ụka na Energy Sector ga-abụ mkpebi dị mma maka ndị na-ewuli ụlọ ike, igwe, ma ọ bụ tinye aka na ụlọ ọrụ ọ bụla na-arụkọ ọrụ na nke dị mkpa ma ọ bụ niche. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-emepụta, dịka ọmụmaatụ, na kemịkal ma ọ bụ ọgwụ na-ere ọgwụ nwere ike ịchọta egwuregwu zuru oke na Ụlọ Nchebe Environment, ma ọ bụ Nchịkọta Ahụike nke ndị ọchịchị.
Interviewing Agency or Member Community
Dị ka ụzọ gara aga, ịjụ ajụjụ banyere onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ ụfọdụ ndị metụtara mmekọrịta ndị metụtara ya bụkwa ohere dị mma iji nwetaghachi akwụkwọ nkwado si n'aka saịtị gọọmenti. Ihe niile ị chọrọ ebe a bụ ịkọrọ onye ahụ a gbara ajụjụ ọnụ ma mee ihe nile tupu oge eruo - tupu ịmalite ịrụ ọrụ na isiokwu ahụ bara uru ma mesịa nweta njikọ gị na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog gị.Ihe ngosi: tụlee ịhọrọ iwu ọhụụ ọ bụla nke a na-atụ anya na ọ ga-emetụta ọrụ ịntanetị ma ọ bụ azụmahịa gị dum.
Mpempe akwukwo ihe owuwu
Dabere na niche, iwu akwukwo akwukwo nwere ike iburu ihe nghota.Enwere m ụfọdụ, dịka ọmụmaatụ na azụmahịa obodo, tụlee ịmepụta akwụkwọ iji nweta ozi bara uru gbasara iwu mpaghara ma ọ bụ ụkpụrụ iwu nke ga-aba uru maka ndị ọrụ mpaghara. Ọzọkwa, tụlee ịdebere na ụfọdụ akwụkwọ nchịkwa ndị dị ugbu a nke ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nwere.
E kwuwerị, nkwupụta otuto bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe ọ bụla a na-akwado ma gosipụta ụzọ iji zụtaghachi akwụkwọ ndị GOV sitere n'aka ụlọ ọrụ gọọmentị. Ihe niile ị chọrọ bụ ịchọta isi ihe mgbu nke dị mkpa ugbu a - ma kwuo na ọdịnaya gị kpọmkwem ihe ha chọrọ ịnụ. N'ezie, ị ghaghị ịnwe mmetụta n'ezie - ma kwalite ọdịnaya gị dịka ị nwere ike.